Warar is khilaafsan oo kasoo baxayo sababta keentay in la rukhseeyo ciidamo ka tirsan gaashaan - Caasimada Online
Home Warar Warar is khilaafsan oo kasoo baxayo sababta keentay in la rukhseeyo ciidamo...
Warar is khilaafsan oo kasoo baxayo sababta keentay in la rukhseeyo ciidamo ka tirsan gaashaan
Muqdisho (Caasimadda Online) – Saraakiil ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa Caasimadda u sheegay in la ruqseeyay qaar ka mid ah Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan.
Ciidanka Gaashaan ayaa ka tirsan hay’ada NISA waxaana qeyb ka mid ah Ciidamada fuliya Howlgalada gaarka ah loono diro meelaha ay qatarta ah oo ay ka guul gaari waayaan Ciidanka kale ee Soomaalida.
Askartan la ruqseeyay ayaa gaaraya illaa kontameeyo askari, iyadoo warar is khilaafsan ay ka soo baxayaan sababaha loo ruqseeyay.
Warar laga helay Ilo kala duwan ayaa sheegaya inuu isku dhac dhex maray ciidamadan iyo mas’uuliyiinta shirkad Mareykan ah ee gacanta ku heysay ciidamadan, kaasoo ku saabsanaa dhanka awaamiirta.
Wararka qaar ayaa tilmaamaya inuu khilaaf ka dhashay qalab ciidan oo la sheegay in lagala baxay Xerada ay degenaayeen ciidamadan sida gaarka u tababaran ee Soomaalida ah, taasoo keentay in askar dhowr ah la ruqseeyo, sidoo kalena ay ka caroodaan tiro askar kale.
Ciidamadan ayaa markii dambe xerada isaga soo baxay, iyagoo tagay Xarunta Taliska Nabadsugida, halkaasoo la sheegay inuu ku qaabilay Taliyaha NISA Sanbaloolshe.